Aluminum Louver Panel, Stainless Steel Efitra lamba Wall, Glass Wall Systems - Altop
Lamba manda / Window rindrina & Door & Window
Steel rafitra Series
Tanibe Shinoa tetikasa
Afovoany Atsinanana tetikasa
Azia Atsimo Atsinanana tetikasa
Tetikasa Hong Kong sy Macao
Zava-baovao amin'ny siansa sy ny teknolojia Mitarika ny hoavy
Miaraka amin'ny fitomboana haingana ny fanorenana iraisam-pirenena tsena, ny olona ny fangatahana ny fanorenana fitaovana vy vokatra Mitombo isan'andro. Mba hihaona tsena fitakiana sy hanaraka tsena fironana, Altop endrika ivelany isehoan'ny Co., Ltd. teraka ny hevitry ny hoe "lasa matotra, matihanina sy rafitra fanorenana miavaka fampidirana mpanome tolotra". Ny orinasa, fampidirana R & D, famolavolana, ny famokarana, ny varotra sy ny fametrahana ao amin'ny iray, dia natokana manome iray-mijanona asa fandrakofana angovo-mamonjy lamba rindrina varavarankely sy ny varavarana, aliminioma vokatra, Stainless vy vokatra, lamba manda vy rafitra sy ny Accessories amin'ny high- teknolojia afa-po.
Momba ny fikarohana sy ny fampandrosoana
Omeo mpanjifa amin'ny orinasa feno sy tanteraka vahaolana sy Ankehitriny-varotra fanohanana ara-teknika, ary manao fikarohana sy ny fampandrosoana lasibatra hitsena ilain'ny mpanjifa.
Mombamomba ny famolavolana tetikasa
In-lalina fandalinana ny tetikasa, miaraka amin'ny "lamaody, ny fampiharana, ny fampandrosoana maharitra, tendrena ho" toy ny fitsipika mitarika, fampidirana ny teknolojia maoderina nivoaka farany famolavolana foto-kevitra.
About vokatra famokarana
Manana ny orinasa tokony ho 40.000 metatra toradroa, fitaovana isan-karazany isa nandroso fitaovana fanaraha-maso sy ny tifitra famokarana andalana, tsara ofana ekipa mpamokatra matihanina, fanaraha-maso henjana kalitao fitsipika ho an'ny dingana famokarana, nandinika sy ny fitaterana.
About vokatra varotra
Maro ireo vokatra sy asa fanompoana tranga any Afovoany Atsinanana, Aostralia, sy Amerika Avaratra, Azia Atsimo Atsinanana ary ny hafa firenena sy ny faritra. Isika dia hanohy hamaky ny alalan 'ny afovoany sy avo-tsena farany faritra amin'ny faritra lehibe eto amin'izao tontolo izao.
Company amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, famolavolana, famokarana, varotra, fametrahana.
Folo taona mahery ny orinasa traikefa.
No.1 YuanDong West Road, Fu Hai Street, Bao'An District. Shenzhen, Sina
Tongasoa eto amin'ny famandrihana ny fampahalalana manan-danja, dia handefa anareo vaovao mahaliana ny mailbox.
Fanohanana ara-teknika: Globalso
Stainless Steel Efitra lamba Wall, Stainless Steel Glass Efitra lamba Wall , Stainless Steel Hollow Ball Sculpture , Stainless Steel sehatra Sculpture ,